Ethiopia defence minister replaced after criticising Abiy – Kichuu
HomeNewsAfricaEthiopia defence minister replaced after criticising Abiy
Lemma Megersa, a former close ally of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, has been replaced as defence minister
Jawar Mohammed’s sister was today arrested for speaking to the press on his health condition
“Obboleettii Jawar Media irratti dubbatte jechuun sobanii hidhanii jiru. Sa’a lama dura qabanii hidhan. Dhukkubuu jawar situ media tti hime jedhanii hidhan.”
Amma gadi dhiifamtee jedha jiran.
Update: she has been released
OP-ED: The case of Ethiopia
Update: Ethiopian Security forces have used excessive and lethal force against largely peaceful protests in Oromia.